Ikhumba liyinxalenye ebalulekileyo yomzimba womntu. Idlala indima ebalulekileyo ebomini babantu. Ukhusela umzimba wethu kwimiphumo yendalo, usinika ithuba lokuthintela, ukulawula ukushisa komzimba wethu. Kwakhona, ulusu lukhusela izitho zangaphakathi kumonakalo. Kodwa ukuze kwenziwe yonke le misebenzi ikhulu leepesenti, lifuna ukunakekelwa okufanelekileyo.
Sonke siyazi ukuba ngexesha lethu kwisitora unokufumana isixa esikhulu sezo zonke izicumbiso kwesikhumba, kodwa izimonyo eziphezulu zibiza kakhulu, kwaye isiqingatha sezinto eziqulethwe zihlanganisiwe. Kwaye apha "isiluleko sikagogo" siya kusinceda, okwakudlulile emlonyeni ukuya emlonyeni. Ukususela kwixesha elidlulileyo, iindlela zabantu zithethwa ngomzimba womntu. Ngoko siza kusihloko sendaba yethu: "Ubuhle kunye nempilo yengqondo: izigulane zabantu".
Makhe sicinge ngeenzuzo zezilwanyana zokunyamekela kwesikhumba kwiindawo zokugcina izinto. Okwangoku, i-dermatologists idla ngokukhawuleza ukujongana nokunyuka kwezilwanyana. Akukho nto ngenxa yokuba ookhokho bethu bemveli babesebenzisa iimveliso zokunakekelwa kwesikhumba. Kwaye kwangelo xesha babenombono omuhle, nangona bebengaselula. Inzuzo enkulu kunazo zonke iziqhumiso zasekhaya kukuba ayinalo i-preservatives, i-perfumes kunye nedayi. Kwaye ke, qwalasela ngeyona nkcukacha into esiyidinga ngayo ubuhle kunye nempilo yelusu: izilwanyana zabantu kunye nezinye iindlela ezibalulekileyo zokugcina ulutsha kunye nokunyaniseka:
-Kwazisa ngeveki usula ulusu ngejisi lemon okanye uceke wekhukhamba entsha.
- Yenza itiye i-lime uze uyihlambe ekuseni.
-Sebenzisa i-peach ecocekileyo okanye ioli ye-apricot ukuze ususe i-makeup.
-Ukuphelisa i-oak bark infusion uma uhlala phantsi. Ungaphinda usule isikhumba ngexabiso elincinci leoli le-almond.
- I-apricot, i-apricot kunye ne-almondi oil ikhusela ukuguga kwesikhumba kwaye udale ukhuselo ekushiseni nokushisa.
-Ukuba ubizwa ngokuthi "iibhaka phantsi kwamehlo," kufuneka ubethe i-egg ehlophe, yongeza 1 ithisipuni yerayisi ye-ashberry kunye nama-drops angu-15 eoli ye-peach. Zonke zixubene kwaye zisetyenziswe njengemaski.
- Ukuba unesikhumba esomileyo nesicatshulwayo, kufuneka ufeze ngeglasi yamanzi abilayo, udibanise iintyatyambo ze-chamomile kunye namaqabunga amhlophe. Ngamnye uthathe i-1 teaspoonful. Lindela ide ipholile ukuya kwiqondo lokushisa lomzimba, uze ususe indawo yengxaki yesikhumba. Le nkqubo kufuneka yenziwe ngamaxesha amabini ngosuku - kusasa nangokuhlwa kwenyanga.
Kukho iimbali zamakhosikazi ezasala kuthiwa ngabasetyhini abahlala kumaxesha amandulo. Ngethuba apho bebengakabikho ngeendlela zokuhlaziya iikhilogram kunye neekhilomitha zimila kwii-shelves zeevenkile ezahlukeneyo. Enye yale mfihlelo emancinci, kodwa eyona nto ibalulekileyo yinkqutyana yeqhwa. Ewe, ewe, i-cube yeqhekeza yokubhinqa kusasa ebusweni, kuya kukunceda ngokukhawuleza ukuba uvuke. Idala umphumela okhuthazayo, kwaye isikhumba sakho sithola umthunzi osihlaza kwaye ugcine u-elasticity kunye nolutsha olude. Le nkqubo iqinisa imithwalo yegazi. Nangona kunjalo, umntu akufanele akhuphe.
Unokusula ubuso bakho ngamanzi aqhelekileyo aqhobileyo, okanye unokwenziwa kwimifuno. Kunconywa ukuba usule bobabini ubuso nentamo, kunye nommandla we-decollete. Ukulungiswa kwamathambo kunqwenela ukusebenzisa i-non-carbonated, yamaminerali. Njengomthetho, umlinganiselo olandelayo unconywa umhluzi: 1 ithisipuni yesityalo sakho esikhethiweyo se-0.5 izindebe zamanzi abilayo. Konke oku kugxininiswe imizuzu engama-30, ke kuthelelwa kwi-mold mold kunye neqhwa kwifriji. Njengobhonasi kwisiphumo sezonyakatho, unomsindo kwaye uphathwe, ngenxa yokuba usebenzisa rhoqo icebo kusasa, uya kubakhohlwa ngokukhawuleza malunga nephunga lebhola.
Nazi ezinye iindlela zokwenza iimfesholo kunye neengqungquthela zokuqhwala:
1. I-tea ehlaza.
2. 50/50 ubisi + amanzi.
3. Ijusi yekhukhamba enkulu, ekhulile.
4. Ukuba unesikhumba somnxeba, yenza i-decoction kwi-bark ye-oki.
5. Ukuba unesikhumba esiqhelekileyo okanye esinamafutha, sebenzisa i-decoction ye-chamomile.
6. Iimpawu ezintle, uze uze uhlangulwe xa unesisindo sokutyunjwa kweminti kunye nejisi lemon kunye nokugqithiswa kwe-chamomile kunye nomso ofanayo.
7. Amanzi angaqhelekanga angabonakali ngamaminerali.
8. Ukunyuswa kwama-eucalyptus.
9. Iitoni kwaye ubuyisela kwakhona isikhumba nge-decoction yekhofi yendalo.
10. Umhluzi uphenduka.
11. Ngesikhumba esifanayo, i-decoction ye-Lindind igqibelele.
12. Hlaba uphinde usonge ama-roses, ukuze ijusi ivumeleke, ngamanzi abilisiwe. Sebenzisa amanzi ashisayo, kungabi ngamanzi abilayo.
13. Nge-acne, ityuwa yolwandle iyacetyiswa. Thatha ingilazi yamanzi 1 ithisipuni yetyuwa.
14. Ukuze ulusu elomileyo kucetyiswa ukuba wenze i-decoction ye-plantain nge-mint.
15. Ukusetyenziswa kwesikhumba ngokuqhelekileyo umhluzi we-sage.
Ungakulibali ukuba emva kokuba ususule ubuso bakho ngeqhwa, kufuneka uhoxise ukubonakalisa kwisibuko uze uthi: "Sawubona, mzalwana! Ukhangeleka! "
Ngoko, sibone inzuzo ye "salon home beauty". Masikhumbule kwakhona:
a) akukho ziphumo zecala;
b) sifumana isikhumba esincinci, esempilweni kunye esikhanyayo - izinto eziphilayo zithathwa ngokukhawuleza ngesikhumba kwaye zihlambulule izibonda zayo;
c) Iimpawu zendalo zibuyisela ngokupheleleyo isikhumba, zenze ithambile, yondle kunye ne-elastic.
Ngethuba lethu, uluntu sele lilibale ukuphumla, ukuphumla komphefumlo nomzimba. Ngokusoloko sivuka ekuseni, sidla into ngokukhawuleza, kuba kufuneka sifike emsebenzini ngexesha. Kwaye ngokuhlwa siya ekhaya sidinwe, sinomnqweno wokulala esikufutshane. Kodwa sikhohlwa ukuba ubuhle kunye nempilo yesikhumba sethu, leyo, ngendlela, ayifani bhetele kwaye ibe nenhle ngaphezu kweminyaka, kuxhomekeke, okokuqala, kungekuphi na ama-creams angayifumana kwiglasi yakho yokupaka. Into ephambili yombuso wemihla, kwiintlobo ezininzi-ukulala. Ngoko ke, bafazi, fumana ukulala ngokwaneleyo, sebenzisa iingcebiso zethu, kwaye uya kuba yintle enhle kwaye inempilo! Kwaye oku kubaluleke kakhulu kwibhinqa, nokuba yeyiphi na ubudala. Kwaye mna, kungcono ukusebenzisa oko kuthiwa "izigulane zabantu" kunokugqitywa ngamakhanda ezinyaweni ngeendlela zokuzithoba - emva koko konke, uhlobo luyazi indlela yokunceda ulusu lwethu!
Inkqubo yokwenza i-photorejuvenation
Imiphumo emibi yokutya
Ukukhethwa kombala weenwele kumbala wesikhumba
Ukukhethwa kweziglasi ukuze ubone nokuheha
I-sauce e-mushroom ehlaza
Iingubo zokugqoka "ngeepayipi" - i-summer trendy-2017
Siyavuyisela kwiSuku loNtsapho kwivesi kunye neprose. Iifom ezimfutshane kunye ezimnandi kwiSuku loNtsapho. Ngumhla ka-Meyi 2016 Usuku lweentsapho?
I saladi "Stolichniy"
Iqoqo elitsha leempahla kunye nezixhobo ezisuka kwi-ECONICA, iAntumn-Winter 2015/16
I-Pea isobho kunye nenkukhu etshaya
Isibindi senyama yesonka
Solyanka kwiklabishi entsha
U-Ksenia Sobchak wathatha umyeni wakhe kude neebhendi ezihlaselayo